Taorian’ireo andiany tonga avy any Koweit sy ny nosy Maorisy ary tatsy Afrika dia namoaka tetiandro vaovao hahafahan’ireo Malagasy, nihitsoka any ivelany, mody an-tanindrazana ny fanjakana.
Nampahafantatra izany nandritra ny fandaharana manokana ny alin’ny alahady 9 aogositra 2020 ny filoha Andry Rajoelina.
Miainga ao Paris ireo avy any Eoropa, ka in-droa miantoana ny fiaramanidin’ny kaompania Air Madagascar no hitatitra azy ireo. Miainga ny sabotsy 15 aogositra ny andiany voalohany ary amin’ny 22 aogositra ny andiany faharoa.
Amin’ny 19 Aogositra kosa ny fampodiana ireo Malagasy tavela any Inde, amin’ny alalan’ny fiaramanidin’ny Air Madagascar hatrany.
Ho an’ireo tavela any Afrika sy amin’ireo nosy manodidina toa an’i Comores, La Réunion… dia manantona ny Ambasady na Consul ireo Malagasy any ireo, amin’ny fandaminana ny fampodiana azy ireo.
Miantoka ny sarandalany avy izay hody, fa manamora ny fandehanan’ny fiaramanidin’ny Air Madagascar no ataon’ny fanjakana, araka ny fanazavan’ny filoha Andry Rajoelina.
Mila manao fitiliana telo andro mialoha ny hiangana ny mpandeha isanisany. Tsy maintsy manao fitiliana PCR tsirairay avy eo ampahatongavana eny Ivato avy eo dia atoka-monina avy hatrany mandra-piandry ny valin’ny fitiliana.
Ho an’ireo olona izay maniry hivoaka any ivelan’i Madagasikara indray, indrindra fa ny mpianatra dia omena alalana saingy tsy maintsy mampiseho taratasy fanamarinana toy ny « visa » sy fanamarinana fisoratana anarana amin’ny sekoly hianarana any ivelany.
Ireo izay any amin'ny faritra dia omena halalana hiakatra eto an-drenivohitra hikarakara ny taratasy sy ny famandrihan-toerana amin’ny Air Madagascar.
Hiainga ny 21 Aogositra ny sidin’ny Air Madagascar hitondra azy ireo hiazo an’i Frantsa.